China SUN-800D Ultrasound ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပံ့ပိုးသူများ | နေရောင်
၁။ မည်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွင်မဆိုပရင်တာများနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သော PC အခြေခံ Ultrasound ။
၂။ အသစ်သောပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း activate လုပ်ရန်အခမဲ့ထည့်သွင်းထားသော 3D software ။
၃။ ပါဝါပိတ်ထားချိန်တွင်အနည်းဆုံး ၃ နာရီဆက်တိုက်အလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
၄။ OB / GYN၊ နှလုံး၊ ဆီးလမ်းကြောင်း၊ အော်ဂဲနစ်အသေးစား၊ ကြွက်သား၊ သွေးကြောဆိုင်ရာအစရှိသည့်တိုင်းတာမှုများနှင့်တိုင်းတာမှု ၆ မျိုး။
15 လက်မနှင့်အတူ 5. Big LED မော်နီတာ။
၆။ အသုံးပြုမှုအောက်တွင်၊ သင့်နောက်လုပ်ဆောင်မှုကိုလမ်းညွှန်ရန်အတွက်ဆွေမျိုးအကြံပေးချက်များသည်အောက်ခြေတွင်ပေါ်လာလိမ့်မည်
၇။ ဘာသာစကားပေါင်းစုံလုပ်ဆောင်ချက် - အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ်၊ စပိန်နှင့်ပေါ်တူဂီ၊ ရုရှား၊ အာရဗီ၊ ပြင်သစ်။
၈။ ပုံရိပ်အရည်အသွေးနှင့် 175 ဒီဂရီကြည့်ရှုနိုင်သည့်ထောင့်
မော်ဒယ်နံပါတ် နေ -800D
တူရိယာခွဲခြား Class II
အမျိုးအစား Hot Selling Ultrasound၊ အိတ်ဆောင် Ultrasonic Diagnostic Devices
ဘက်ထရီ ဆက်လက်3နာရီထက်ပိုပြီးအလုပ်လုပ်ကြသည်
USB port များ USB port ၂ ခု၊ USB flash နှင့်လေဆာပရင်တာများဆက်သွယ်မှု
အထူး အထွေထွေ, OB / GYN, သွေးကြော, နှလုံးရောဂါ, ဆီး, ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါသေးငယ်တဲ့။
ပုံရိပ်ပုံစံ 2D အခမဲ့လက် 3D
ရုပ်ပုံ၊ AVI, JPG, BMP, PNG, TIF, DICOM
TGC 8-segment TGC, အနီး / ဝေးအမြတ်၏တိကျသောညှိနှိုင်းမှု
Cine ကွင်းဆက် 512 Frame (အလိုအလျောက် / လက်စွဲ)
ပရင်တာ မဆိုပရင်တာ OK ကိုဖြစ်ပါတယ်
Multi- ဘာသာစကား function ကို အင်္ဂလိပ်၊ တရုတ်၊ စပိန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ပြင်သစ်
တစ်ခုတည်းအထုပ်အရွယ်အစား: 26X49X49 စင်တီမီတာ
လူပျိုစုစုပေါင်းအလေးချိန်: 12.500 ကီလိုဂရမ်
Package အမျိုးအစား: ပင်လယ်ခံထိုက်သောထုပ်ပိုးခြင်း / Hot Selling ultrasound အတွက်လေသင့်လျော်သောထုပ်ပိုးခြင်း
အရေအတွက် (ယူနစ်) ၁ - ၅ > ၅
Hot Selling Laptop ကို အသုံးပြု၍ Ultrasonic အားနည်းချက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ Ultrasound Sun-800D
Sunbright သည် 2D၊ 3D၊ အနက်၊ အဖြူရောင်၊ အရောင်အမျိုးမျိုးသော Doppler များနှင့်ကွဲပြားသော Laptop အရွယ်ရှိ ultrasound စနစ်များကိုကြေငြာလိုက်သည့်အတွက်ဂုဏ်ယူသည်။ ကုန်သည်များသည် Sunbright နှင့် ASAP ကိုဖြန့်ချိရန်အတွက်နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါသည်။
ပုံမှန်လက်တော့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးအနေနှင့် Sun-800D 3D Ultrasound စနစ်နောက်ဆုံးပေါ်ဇီဝဆေးဝါးအင်ဂျင်နီယာနည်းပညာနှင့် ultrasonic ပုံရိပ်နည်းပညာများဖြင့်ပေါင်းစပ်။ အကောင်းဆုံးပုံရိပ်အရည်အသွေး၊ ထူးခြားသောလက်တွေ့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဘက်စုံသုံးမှု၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူသည့်သင်ခန်းစာလုပ်ငန်းအသွားအလာ၊ ဘယ်နေရာမဆို၊ ဘယ်အချိန်မဆို ultrasound ပညာရှင်တွေရဲ့ညာဘက်လက်ပါပဲ။
ပါ ၀ င်သည့်ဘက်ထရီ၊ အလုပ်လုပ်ချိန် ၃ နာရီကျော်၊ စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်များမရရှိနိုင်သောနေရာများသို့ဂရုစိုက်မှုတိုးချဲ့သည်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် Ultrasound စနစ်သာမကဘဲလက်တော့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးလည်းတောင်းဆိုနိုင်သည်။
၁၇၅ ဒီဂရီကြည့်နိုင်သည့်ထောင့်အကျယ်ရှိ ၁၅ လက်မ LED မျက်နှာပြင်
8-segment TGC, အနီး / ဝေးအမြတ်၏တိကျသောညှိနှိုင်းမှု။
USB port ၂ ခု၊ USB flash နှင့်လေဆာပရင်တာများဆက်သွယ်မှု
Discom 3.0 port၊ မော်ကွန်းတိုက်၊ PACS သို့မဟုတ်ဝတ်ပြုမှုနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအမျိုးမျိုး: ခုံး, micro- ခုံး, endo- လိုင် / rectal, linear, အသံအတိုးအကျယ်
အထူး - ယေဘူယျ၊ OB / GYN၊ သွေးကြော၊ နှလုံးအထူးကု၊ ဆီး၊
display mode; B, 2B, 4B, B / M, M
ပုံရိပ် mode: 2D အခမဲ့လက် 3D
image / video format: AVI, JPG, BMP, PNG, TIF, DICOM
3.5MHz R60 / R50 ခုံးစမ်းသပ်မှု; Multi- ကြိမ်နှုန်း 2.0MHz မှ 5.0MHz မှ
7.5MHz L40 linear စုံစမ်းစစ်ဆေး; Multi- ကြိမ်နှုန်း 5.0MHz မှ 10.0MHz ရန်
6.5MHz R10 / R13 transvaginal စုံစမ်းစစ်ဆေး; Multi- ကြိမ်နှုန်း 5.0MHz မှ 8.0MHz မှ
3.5MHz R20 နှလုံးစမ်းစစ်ခြင်း၊ Multi- ကြိမ်နှုန်း 2.0MHz မှ 5.0MHz မှ
၂.၂ မှ ၁၂.၀ မီဂါဇအထိ၊ ကြိမ်နှုန်းပေါင်းစုံစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှု ၄ ခုမှပြုလုပ်သော Dynamic frequency scan ဖတ်ခြင်း
d100dB, switching functions4ဆင့်
ထိန်းချုပ်နိုင်သောဘောင်ဆက်စပ်မှု၊ Gamma ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အစွန်းတိုးမြှင့်ခြင်း၊ ပုံချောချောခြင်း၊ ရုပ်ပုံဆွဲခြင်း၊ အလိုအလျောက်အမြတ်ညှိနှိုင်းခြင်း၊ အပေါ် / အောက်၊ ဘယ် / ညာနှင့်အနက် / အဖြူစကားပြောဆိုမှု။
stepless ချဲ့ခြင်း, ပြောင်းလဲနေသော Real-time PIP local zoom လုပ်ဆောင်မှုများ
512 ဘောင်အော်တို / လက်စွဲစာအုပ် cine ကွင်းဆက်; မျက်နှာပြင်စုံဖန်သားပြင် cine loop (4B, 9B); B / M နှင့် M mode အောက်ရှိ auto / manual cine loop ။
ပုံရိပ်များကို pigeonholing, browsing, နှိုင်းယှဉ်ခြင်း, သိမ်းဆည်းခြင်း, ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်လွှဲပြောင်းခြင်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ ရာပေါင်းများစွာသောသောင်းနှင့်ချီသောပုံများနှင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသော cine loop များကိုသိမ်းဆည်းနိုင်သည်။ သိမ်းဆည်းထားသောရုပ်ပုံများကိုဆလိုက်မုဒ်အောက်ရှိ full-screen browse ဖြင့်လည်ပတ်နိုင်သည်။
ပတ်လည်အတိုင်းအတာနှင့်areaရိယာကိုအကွာအဝေးသို့မဟုတ်ဘဲဥပုံနည်းလမ်းဖြင့်တိုင်းတာနိုင်သည်။ ပတ်လမ်းအတိုင်းအတာနှင့်areaရိယာကိုလမ်းကြောင်းနည်းလမ်းဖြင့်တိုင်းတာနိုင်သည်။ ဘဲဥပုံနည်းလမ်းအားဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်မျက်နှာပြင်areaရိယာနှင့်အသံအတိုးအကျယ်ကိုတိုင်းတာ။ ၄ တိုင်းတာသောတုတ်၊ နှုန်းအတိုင်းအတာ; linear stenosis အချိုး, areaရိယာ stenosis အချိုး, ထောင့်အတိုင်းအတာ။ အားလုံးတွက်ချက်မှုအလိုအလျောက်ဖြစ်ကြသည်။
puncture လမ်းညွှန်, distogram, အပိုင်းပုံဆွဲ
မီနူးစီမံခန့်ခွဲမှု interface ကို
အချိန်နှင့်တပြေးညီအွန်လိုင်းပံ့ပိုးမှုနှင့်လမ်းညွှန်ချက်စနစ်၊ ပုံရိပ်ကြိုတင်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်တစ်လုံးတည်းသော optimization လုပ်ဆောင်ချက်များ။
OB၊ Gyn၊ အော်ဂဲနစ်သေးငယ်သည့်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ၊ နှလုံး၊
OB .: HA, AC, HC, FL, APAD, TAD, FTA, HUMERUS, OFD, THD, TIBIA, ULNA, AFI, LIMP, BBT, FBP၊ BPD၊ CRL၊ GS၊
Gyn .: သားအိမ်အချင်း, intima အထူ, Ovary colume, regnant သားအိမ် follicles, သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာရှည် - အချင်း, သားအိမ်။
ကိုယ်အင်္ဂါအသေးစား: သိုင်းရွိုက်ဂလင်း, တင်ပါးဆုံရိုးအဆစ်။
နှလုံး - AOD, LAD, IVSTd, LVIDd, AA, LAD / AOD, LVPWd, LVIDs, EF, EF SLP, CA / CE, MVCF, CO, CI, LVMWI, AVSV, FS, ACV, ET, SV, SI, LVMW, QMV ။
ဆီးလမ်းကြောင်း ဆီးနမူနာ, ဆီးကျိတ်, PSAD ။
လူနာအမှုပေါင်းဒေတာဘေ့စစနစ်များ။ ဒေတာအားလုံးကိုသိမ်းဆည်း၊ ရှာဖွေ။ စီမံနိုင်သည်
မျိုးစုံ OB ။ တိုင်းတာခြင်းအစီရင်ခံစာများ, သန္ဓေသားဇီဝကမ္မအဆင့်နှင့်အစီရင်ခံစာများနှင့်သန္ဓေသားကြီးထွားကွေး။
VGA, S-Video, တီဗီဗီဒီယိုဆိပ်ကမ်း
USB2.0 port၊ 2G ချကတ်ပြား
RJ-45 ကွန်ယက်ကို port
အမျိုးမျိုးသောသိမ်းဆည်းခြင်းအမျိုးအစားများကိုထောက်ပံ့သည်။ ၎င်းတွင် soft disk၊ hard disk, flash disk, CF card, SD card နှင့်အခြားအရာများပါဝင်သည်။
ဂျက်ပရင်တာ၊ လေဆာပရင်တာ၊ ဗီဒီယိုပရင်တာနှင့်ဗီဒီယိုအသံဖမ်းစက်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်
ရောဂါနှင့်တိုင်းတာခြင်းဖော်မြူလာများအတွက် system ကိုကြိုတင်။ ကွဲပြားခြားနားသောဖော်မြူလာကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးအရသိရသည်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
ရှေ့သို့ SUN-906C အရောင် Doppler
နောက်တစ်ခု: SUN-808F Ultrasound
တစ် ဦး တည်းအသုံးပြုမှုပြုတ်ရည်စုပ်စက် SUN-500 စျေးပေါ icu ဆိပ်ကမ်း ...
Hospira ပြုတ်ရည်စုပ်စက်အတွက် ...
CE ပဲ့တင်သံစက်ကိုခင်းကျင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခရိုတွန်း colo ...
ECG စက် ၆ ချန်နယ် 12 ခဲမျက်နှာပြင်